Ruushku wuxuu amar ku bixiyay 'toddobaadkii aan shaqaynayn' qaranka iyadoo dhimashada COVID-19 ay sii kordhayso
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Ruushka » Ruushku wuxuu amar ku bixiyay 'toddobaadkii aan shaqaynayn' qaranka iyadoo dhimashada COVID-19 ay sii kordhayso
Ruushka wuxuu amraa 'usbuuca aan shaqeynin' ee qaranka iyadoo dhimashada COVID-19 ay sii kordheyso.
Tirada dhimashada maalinlaha ah ee COVID-19 ee Ruushka ayaa kor u kacday toddobaadyo waxayna kor u dhaaftay 1,000 markii ugu horreysay intii lagu jiray usbuuca dhammaadka iyada oo ay jiraan heerar tallaal oo caajis ah, dabeecadihii dadweynaha ee ku aaddan taxaddarrada iyo diidmada dowladda ee adkeynta xayiraadaha.
Ruushka ayaa soo sheegay 1,028 dhimasho COVID 24 saac gudahood, waana tiradii ugu badnayd tan iyo bilowgii masiibada.
Tirada ugu badan ee dhimashada ayaa laga soo sheegay labada magaalo ee ugu waaweyn dalka, Moscow iyo St. Petersburg.
Waxa kale oo si xawli ah u kordhay tirada tijaabooyinka togan ee fayraska, iyada oo 34,073 qof la xaqiijiyey in uu cudurka qaaday isla muddadaas.
Shaqaalaha Ruushka ayaa lagu amray inay shaqada ka maqnaadaan muddo toddobaad ah laga bilaabo dabayaaqada bishaan iyada oo ay sii kordhayaan tirada cusub ee cudurka COVID-19 iyo dhimashada.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa oggolaaday qorshayaasha dowladda ee ah in shaqaalaha dalku ay amar ku bixiyaan fasax toddobaad ah, si loo joojiyo kororka tirada dhimashada coronavirus.
Guddi hawleedka dowladda Ruushka ayaa Arbacadii soo sheegay 1,028 dhimasho COVID ah 24 -kii saac ee la soo dhaafay, waana tiradii ugu badnayd tan iyo bilowgii masiibada. Taasi ayaa keentay RussiaWadarta guud ee dhimashada ayaa ah 226,353, oo ah tan ugu sarreysa Yurub.
Kulan ay yeesheen mas'uuliyiinta dowladda Arbacadii, Putin wuxuu sii daayay diyaargarowga lagu kordhinayo laba maalmood oo fasax qaran ah oo la qorsheeyay iyo in shaqaale badan guriga lagu hayo, mushaarna la siiyo, toddobaad dhan.
Sida qorshuhu yahay, xafiisyada ayaa dalka oo dhan la xiri doonaa inta u dhexeysa 30ka Oktoobar iyo 7da Nofembar, laakiin Putin wuxuu intaas ku daray in gobollada qaarkood oo ay xaaladdu ugu halista badan tahay, xilliga aan shaqeynin uu bilaaban karo horraanta Sabtida oo la kordhiyo wixii ka dambeeya Nofeembar 7.
Sida laga soo xigtay Putin, hadda waa muhiim in Russia “Waxay jebineysaa silsiladda faafitaanka fayraska… Shaqadeenna ugu weyn hadda waa inaan ilaalino nolosha muwaadiniinta iyo, intii suurtagal ah, in la yareeyo faafitaanka caabuqa COVID-19.”
Qorshuhu wuxuu kaloo soo jeedinayaa in dhammaan shaqaalaha aan la tallaalin ee ka weyn 60 jir loo wareejiyo qorshe shaqo fog fog bisha soo socota, oo la siiyo shaqaalaha laba maalmood oo kala duwan oo ay tagaan si ay uga tallaalaan COVID-19.
RussiaTirooyinka dhimashada COVID-19 ee maalinlaha ah ayaa soo kordhayay toddobaadyo waxayna kor u dhaafeen 1,000 markii ugu horreysay intii lagu jiray usbuuca dhammaadka iyada oo ay jiraan heerar tallaal oo daahsan, dabeecadihii dadweynaha ee ku aaddan taxaddarrada iyo diidmada dowladda ee adkeynta xannibaadaha.
Qiyaastii 45 milyan oo Ruush ah, ama boqolkiiba 32 dadka ku dhow 146 milyan oo qof, ayaa si buuxda loo tallaaley.
Gobollada qaarkood, caabuqyada sii kordhaya ayaa ku qasbay mas'uuliyiinta inay hakiyaan gargaarka caafimaad ee dadka maadaama xarumaha daryeelka caafimaadka lagu qasbay inay xoogga saaraan daaweynta bukaannada coronavirus.
In Moscow, si kastaba ha noqotee, noloshu waxay u sii socotay sidii caadiga ahayd, maqaayadaha iyo tiyaatarada filimada oo ay dadku la ciirciirayaan, dadweyne aad u badan oo ku qulqulaya goobaha lagu caweeyo iyo baararka karaoke iyo rakaabka ayaa si weyn iskaga indho tiraya waajibaadka maaskaro ee gaadiidka dadweynaha, xitaa sida qaybaha daryeelka degdegga ah ay buuxiyeen toddobaadyadii la soo dhaafay.
Horaantii Arbacadii, mas'uuliyiinta Ruushku waxay ku dhawaaqeen in waddanku diiwaangeliyay tirada ugu badan ee dhimashada la xiriirta coronavirus tan iyo bilowgii masiibada sanadkii hore iyo in tirada ugu badan ee dhimashada laga soo sheegay labada magaalo ee ugu waaweyn dalka, Moscow iyo St. Petersburg.